Social Web Suite: A Social Media Management Platform Wuru maka WordPress nkwusa | Martech Zone
Social Web Suite: A Social Media Management Platform Wuru maka WordPress Publishers
Saturday, March 20, 2021 Bọchị Sọnde, Machị 21, 2021 Douglas Karr
Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ gị na-ebipụta akwụkwọ ma ghara iji usoro mgbasa ozi nke ọma na-akwalite ọdịnaya ahụ, ị ​​na-efunahụ ntakịrị okporo ụzọ. Na… maka nsonaazụ kacha mma, ọkwa ọ bụla nwere ike iji ụfọdụ njikarịcha dabere na ikpo okwu ị na-eji.
Ugbu a, e nwere nanị ole na ole nhọrọ maka akpaghị aka ebi akwụkwọ si gị WordPress saịtị:
Imirikiti usoro ntanetị mgbasa ozi na-arụ ọrụ nwere njirimara ebe ị nwere ike ibipụta site na ndepụta RSS.
Optionally, ị nwere ike ahu nagide a ndepụta nyiwe nke na-ebipụta na akpaghị aka mgbe ndepụta gị emelitere, kwa.
'Lọ ọrụ WordPress na-enyekwa Jetpack nke nwere nhọrọ Mgbasa ozi ịkwanye ọkwa gị na ọwa gị.
N'okwu nke ọ bụla, ị gbakwunye akụkọ mgbasa ozi gị na ozugbo emelitere ndepụta gị, ozi ahụ na-achịkọta ma bipụta ọwa kwesịrị ekwesị. Ha na-arụ ọrụ nke ọma, mana enwere nnukwu mmachi niile.
Ebee ka a post aha nwere ike kachasị maka ọchụchọ, a mgbasa ozi mgbasa ozi nwere ike ịchọ ịmatakwu ma jiri hashtags mee ka nlebara anya ọzọ. N'ihi ya, ihe ka ọtụtụ n'ime ndị nkwusa na-achọ ịkwado mgbasa ozi ọha na eze zuru oke ma weghachite mmelite mgbasa ozi ha. Ọ bụ ezie na ọ na - ewe nkeji ole na ole iji dezie ma bipụta na ikpo okwu ọ bụla, nsonaazụ ya nwere ike ịbawanye mma karịa ịbupụ ndepụta gị.
Nchịkọta Weebụ Social
Tina Todorovic na Dejan Markovic wuru ngwa mgbakwunye WordPress nke ejikọtara na Buffer. Mana ka ha bidoro na-arịwanye elu arịrịọ a na-arịọ Buffer enweghị, ha kpebiri ịwube ikpo okwu nke ha - Nchịkọta Weebụ Social. Social Web Suite na-etinye ihe niile ihe ntanetị mgbasa ozi na-elekọta mmadụ chọrọ na ntinye nke ọma na WordPress. Offọdụ n'ime atụmatụ ndị a gụnyere:
Ikike ọ bụghị naanị ijikọta ozi, mana peeji, edemede, na mkpado!
A na-ebipụta posts gị ozugbo na akaụntụ mmekọrịta mmadụ na ibe ha ozugbo e bipụtara ha na WordPress wee wega ha n'azụ ụdị ha ka eweghachite ha ọzọ ma emechaa!
Ngwa akpaaka dị mfe nke na-agbanwe ụdị ma ọ bụ mkpado nke post ahụ n'ime hashtags na ntanetị mgbasa ozi gị.
Akpado URL Mgbasa Ozi Google Analytics na akpaghị aka na akara UTM na-akpaghị aka.
Kama ibipụta n'otu ntabi anya na mgbasa ozi mmekọrịta, a na-akwụnye ihe ndị ahụ n'ahịrị maka oge kachasị mma iji bipụta ya.
Enwere ike ibupute akwụkwọ ederede Evergreen.
A kalenda na-ebipụta zuru ezu na-enye gị echiche doro anya banyere ihe na mgbe a ga-ebipụta mmelite ọ bụla.
Enwere nkwado dị ukwuu maka nyiwe mgbasa ozi mmekọrịta ọhaneze na Social Web Suite. Can nwere ike bipụtara na Facebook Pages ma ọ bụ Otu, Instagram ma ọ bụ Akaụntụ Azụmaahịa Instagram, Twitter, Profaịlụ LinkedIn ma ọ bụ Peeji. Ma, ọ bụrụ n'ịchọrọ iweta vidiyo Youtube gị ma ọ bụ ndepụta RSS ọzọ, ị nwekwara ike ịme nke ahụ.
Social Web Suite bụ ngwa ọrụ mmemme mmekọrịta kachasị ike m jirila. M na-eji ọtụtụ ngwaọrụ ugbu a iji mezuo ihe Social Web Suite na-eme, obi dịkwa m ụtọ ịnweta Social Web Suite na-anọchi ha! Social Web Suite bụ onye na-agbanwe egwuregwu maka ndị na-ede blọgụ na obere azụmaahịa ma ọ ga - eme ka usoro nhazi oge dị mfe!
Maka usoro mgbasa ozi mgbasa ozi zuru oke dị ka nke a, ọnụahịa dị ọnụ ala. Gị nwere ike ịmalite site na otu akaụntụ onye ọrụ nke na-ebipụta akụkọ 5 na-elekọta mmadụ ma na-agagharị n'ụzọ niile gaa na akaụntụ azụmahịa nke na-enye ndị ọrụ 3 ohere na ihe ndekọ 40 nke mgbasa ozi mmekọrịta.
Bido ụbọchị 14 nke ikpe nke Social Web Suite
Ngosi: Abụ m mmekọ Nchịkọta Weebụ Social.
Tags: FacebookÒtù FacebookNkọwa Facebookinstagramprofaịlụ azụmaahịa instagramLinkedInNjikọ njikọprofaịlụ njikọrss na-elekọta mmadụ mgbasa ozikalenda mgbasa ozimgbasa ozi mgbasa ozimgbasa ozi mgbasa oziusoro mgbasa ozi na-elekọta mmadụusoro mgbasa oziụlọ ọrụ na-elekọta mmadụTwitterWordPresswordpress pluginYouTube na-elekọta mmadụ media
InfluencerActive: Chọta ndị B2B na-emetụta ngwa ngwa maka Mgbasa Ozi Mgbasa Ọsọ Na-esote
Ntuziaka ferlọ Ọrụ: Mwepụta ma Gbaa Mmemme Mgbasa Ozi nke Gị